कस्तो अचम्मको जित ! पोर्चुगल २८–० ले विजयी - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अचम्मको जित ! पोर्चुगल २८–० ले विजयी
एजेन्सी । पोर्चुगलमा महिला फुटबलको दोस्रो डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा बेन्फिकाको महिला टिमले २८ गोल गरेको छ ।
दोस्रो डिभिजनको लिगमा डेब्यु गरेको बेन्फिका टिमले पोन्टे डी फेयरलेसलाई २८-० ले हराएको हो। बेन्फिकाले २८ गोल गर्दासम्म पोन्टेले एक गोल पनि फर्काउन सकेन ।
याे पनि पढ्नुस भरतपुरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच फुटबल, जनप्रतिनिधिको टिम ५-१ ले पराजित
दोस्रो मिनेटबाट गोल गर्न सुरु गरेको बेन्फिकाले पहिलो हाफमा १६-० को अग्रता लियो । दोस्रो हाफमा थप १२ गोल भयो । बेन्फिकाका ९ खेलाडीले गोल गरे । बेन्फिकाले महिला टिम सन् २०१७ को अन्त्यतिर गठन गरेको हो । तर नयाँ टिम भएकाले उसले दोस्रो डिभिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको हो ।
गएको अप्रिलमा क्लबमा अनुबन्धित भएकी डार्लेनी डी सुजा एक्लैले ८ गोल गरिन् । पोर्चुगलको फुटबल इतिहासमा सिनियर स्तरको खेलमा यो सबै भन्दा फराकिलो जित हो । यसअघि सन् १९७१ मा पोर्चुगिज कपमा स्पोर्टिङ्गले २१-० को जित निकालेको थियो ।
ट्याग्स: Football Game, portugal football